Uhlaselwe yisifo sohlangothi uLira - Ilanga News
Home Izindaba Uhlaselwe yisifo sohlangothi uLira
Uhlaselwe yisifo sohlangothi uLira
Uqalwe wukugula eyonandisa eGermany
U-LIRA ululamela ekhaya ngemuva kokuhlaselwa yisifo sohlangothi eseGermany lapho ebeyonandisa khona.
NONHLAKANIPHO SHINGA OSAZIWAYO kuleli bafisele umculi ongaconsi kubala-ndeli bakhe uLira, ogama lakhe langempela nguLerato Moipane Molapo (43) ukululama okusheshayo, ngemuva kokuba ithimba lakhe liveze ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uhlaselwe yisifo sohlangothi ehambele ezweni iGermany ngeledlule. Lesi sitatimende sisabalale ngoLwesibili, lapho kuvele ukuthi yize noma ethola usizo olufanele, kodwa kukhona ukuphazamiseka okuncane anakho ikakhulukazi uma ekhuluma. Ukuphuma kwalesi sitatimende kushiye abaningi bemangele, kwazise lezi yizindaba ebezingalindelekile ngalo mculi njengoba bekungakaze kuvele ukuthi akaphilile. Isitatimende siveze ukuthi ubeyonandisa kuleliya lizwe nokuphoqe ukuthi engabe esakwenza ngemuva kokuhlasewa wukugula.
“Lokhu kumshiye engakwazi ukukhuluma kahle kodwa unethimba lodokotela elimelaphayo ukuqinisekisa ukuthi uthola usizo olufanele. Njengamanje uLira uhleli nomndeni wakhe kanye nabangani abamesekayo kuze kube ululama ngokuphelele. “Siyabonga ngemikhuleko yenu, imiyalezo yokumeseka nokusinikeza ithuba lokubhekana nalesi simo esinzima empilweni yakhe,” kusho isitatimende. Ngokusho kosondelene noLira ubuye eGermany esevele esebonakala sengathi uyalulama njengoba eqale wathola usizo khona. Lo mculi ungomunye wabahlonishwayo kuleli uphinde abe nabalandeli ngisho naphesheya kwezilwandle.
Osaziwayo badlulise amazwi okuzwelana naye kanye nomndeni wakhe ezinkundleni zokuxhumana. •UPapi Moloi uthe: “Ngiyakucabanga, ngikufisela ukululama nokukhanya sengathi ungabangcono sthandwa sami.” • UTT Mba uthe: “Ngiyazi ukuthi ungumuntu onamandla nozokwazi ukukunqoba lokhu kugula.” • UCarol Bouwer uthe: “Lira izwe njengamanje lidinga ukukhanya kwakho sengathi ungalulama ngokushesha.” • UHulisani Ravele uthe: “Ngiphakamisa igama lakho ngomkhuleko, sengathi ungasheshe ululame.” • UNhlanhla Nciza uthe: “Siyakuthanda kakhulu sthandwa sami futhi sengathi ungasheshe ululame. Sizokukhulekisa kuze kube kuyenzeka lokho.” • UThembisa Mdoda uthe: “Lulama ntombazane siyakuthanda” • USalamina Mosese uthe: “Ngifisa sengathi ungalulama ngokushesha. Siyakuthanda futhi siyakukhulekisa.”
Previous articleBazobhaciswa kwezinye izikole abafundi
Next articleIzidumbu (58) ezingaziwa emakhazeni aseThekwini